Mavericks Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Data ee Mac OS X 10.9
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Data in Mavericks (Mac OS X 10.9)
Dhinacyada la sii daayo iPad Air, iPad mini bandhigay isha iyo MacBook Pro bandhigay isha, Apple soo bandhigay cusub ee Mac OS X Mavericks. Dhamaan dadka isticmaala Mac soo bixi kartaa oo dayactir ku for free dukaanka Lugood. Marka riyaaqayaa qaababka cabsi badan Mavericks waxay keentaa, waxa aad sameyn karto haddii aad si qalad ah la tirtiro xogta muhiim on your computer cusub Mavericks? Waxaa jira in badan oo software kabashada xogta, laakiin dhammaantiin ma aha iyaga weyn shaqeeyaan Mavericks. Tilmaan-bixiyahan waxa ka socda si uu idiin tuso sida loo doorto software ah soo kabashada xogta weyn oo soo kabsado xogta ku Mavericks in tallaabooyinka.
Talooyin doorashada software kabashada xogta ay khuseyso
1. Waa in aad bixisaa version ah tijaabo lacag la'aan ah, si aad go'aan ka gaari karaan haddii ay ku istaahilo in bixinta.
2. Waa version Mac ah. Waxa ka muhiimsan, waxa ay la jaan qaada Mavericks.
3. Waxa ay taageertaa soo kabashada nooca file in aad laga badiyay ah.
Haddii barnaamijka kulan ku xusan shuruudaha, waxaad heli kartaa isku day ah, laakiin ma dejisan oo ku xidh on Risaalo meesha aad xogta aad badiyay, ama xogta la tirtiray overwritten doonaa oo tageen weligiis. Weli ma hayso wax fikrad ah? Waxaad heli kartaa aan halkan talo: Wondershare Data Recovery for Mac . Barnaamijkan wuxuu la kulmay oo dhan looga baahan yahay, run ahaantii ka badan in. Download version maxkamad free hoose si aad u leeyihiin isku day ah.
Talaabooyinka ee soo kabsaday xogta tirtiray Mavericks
Wondershare Data Recovery for Mac Ku siinayaa 4 hababka soo kabashada xogta:
Lumay Recovery File: Ladnaansho files tirtiray amarka + Delete, ama weelna Trash, iyo files lumay xijaab formatted ama u kharribmay. Recovery ceeriin ah: Haddii lumay Recovery File ma ka heli kartaa macluumaadka aad lumay, waxaad isku dayi kartaa sida hab labaad, laakiin files soo kabsaday lahayn magacyada asalka ah iyo qaab-dhismeedka galka. Recovery Barzakh: Raadi tirtiray, laga badiyay, dib-u-xajmi ama kharribeen maqaal qoruhu ugu horeysay ka dibna soo kabsado files lumay oo ku. furmaya Recovery: Import badbaadiyey natiijada scan in dib loo bilaabo kulan kabashada hore.
Halkan, aynu ka dooro mid hore iyo dhaqaaqo.
Tallaabada 2. Dooro xijaab bartilmaameedka oo iskaan
Marka aad halkan yimaadaan, waxaad ka arki kartaa oo dhan qoruhu iyo aaladaha kaydinta soo bandhigeen oo ku saabsan suuqa kala. Mid ka mid ah halkaas oo xogta aad la tirtiray Dooro iyo guji Scan button inay hore u socdaan. Ka hor inta aadan bilaabin, waxa kale oo aad samayn kartaa qaar ka mid ah goobaha yar sida dejinta nooca file bartilmaameed u ah in aad rabto in aad si aad u ogaato. Waxaa soo gaabin karaa wakhtiga iskaanka.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan xogta tirtiray aad Mavericks Mac
Scan ka dib, aad sabab u scan ka heli kartaa soo bandhiga dhammaan xogta recoverable on your computer Mavericks. Waxaad iyaga ku hubin kartaa mid mid iyo mid aad rabto in aad soo kabsado sax. Si aad u awood ugu Recovery button, waxaad u baahan tahay inaad iibsato code muhiim ah. Fadlan inay hubiyaan in xogta aad rabto in aad si dhab ah laga helay oo soo bandhigay natiijada baaritaan ka hor inta aanad amarka.
Fiiro gaar ah: Haddii aad go'aan ku gaaray in aynu wax soo iibsano u code ugu muhiimsan, fadlan marka hore badbaadin natiijada scan on your computer. Ka dib marka aad dhaqaajiso software ah, aad dajiyaan karaa natiijada iyo isticmaalaan Recovery biloow hab si aad u hesho xogta aad si fudud oo si deg deg ah.
Akhris dheeri ah oo ku saabsan soo kabsaday files ee Maverick:
Photo Recovery U Mavericks, si kasta oo ay u soo kabtaan photos in computer Mavericks Mac? Haa, waxaad iyaga ku soo laabtay qasabno wax yar uun ka heli kartaa. Read more >>
Tirtireyso Trash madhiyey Mavericks: Iyadoo kabashada ah oo xog sax ah, oo aad tegayna Trash madhan ee Mac OS X Mavericks. Read more >>
Kabsado iPhone Data in Mavericks, Maqaalkani waxa uu wax ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay in ay sameeyaan si ay u soo kabsadaan xogta iPhone in Mavericks kuu sheegayaa. Read more >>
Mavericks Lugood ee kaabta shawladda: . article Tani waxay muujinaysaa sida loo soo saaro Lugood gurmad files ee Mac OS X Mavericks in 2 tallaabooyinka aad Read more >>
Data Recovery U Mavericks, Ladnaansho Khasaaray Data ee Mac OS X 10.9 (Mavericks)
Top 9 Free iPhone Data Recovery Software u Mac iyo Windows
Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka USB Cruzer in Windows / Mac
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka Canon EOS 50D